Komorebi: Ahoana ny fomba hanamboarana ireo latabatray amin'ny fiaviana mihetsika? | Avy amin'ny Linux
Mitohy amin'ny lahatsoratra momba ny personalization, anio dia hampiharintsika ny fampiharana voalohany sy tena ilaina ho an'ity tanjona ity, antsoina Komorebi.
Eny, Komorebi dia fampiharana mahafinaritra izay miasa ho tsara tarehy sy azo ovaina manager wallpaper (sary) raikitra sy mavitrika ho an'ny Linux, ary toy izany Conky, mamela antsika hanome fifandraisana manokana ny an'ny dabilio, mba hampisehoana azy ireo ao amin'ny sary an-tsary ny andro ankalazantsika ny #DesktopDay.
Tsy handeha lavitra amin'ny fanazavana azy io isika Komorebi, satria, efa ho 3 taona lasa izay dia efa niresaka momba ny fampiharana izany isika tamin'ny dingana beta. Na izany aza, mitanisa izany Lahatsoratra mifandraika teo aloha, azontsika atao ny milaza fa:
"Komorebi dia mpitantana rindrina mahafinaritra sy mahavariana ho an'ny distro Linux, loharano misokatra izy io ary novolavolain'i Abraham Masri tao Vala. Ny fitaovana dia manana fiaviana azo namboarina izay azo namboarina tamin'ny fomba isan-karazany ary amin'ny fotoana rehetra, manana ambadika efijery marobe (mihetsika, mihetsiketsika, gradient, ankoatry ny hafa), ary manankarena safidy isan-karazany omen'ny fitaovana anay izy ireo." Komorebi: mpitantana sary an-tsaina tsara sy azo ekena
Amin'ity famoahana ankehitriny ity dia hifantoka bebe kokoa amin'ny ny fomba fampiasana ny kinova ankehitriny.
1 Komorebi ao amin'ny XFCE
1.1 Mampiasa Komorebi + Windows Header + Module AppMenu
Komorebi ao amin'ny XFCE
Mampiasa Komorebi + Windows Header + Module AppMenu
Raha hanazava ny fomba hahazoana Desktop manokana sy mihetsika, toy ilay aseho amin'ny sary eo ambony eo dia hampiasa GNU / Linux Distro antso MX Linux 19.3, manokana Respin manokana antsoina hoe FAHAGAGANA.
Ny zavatra voalohany tokony hatao dia ny fametrahana Komorebi, misintona avy amin'ny tranokala ofisialy ao amin'ny GitHub, ny installer mety ho an'ny a GNU / Linux Distro tahaka ilay nampiasainay tamin'ity Tutorial ity, izay miorina amin'ny Debian 10 ary mampiasa XFCE. Mba hanaovana izany, azonao atao ihany koa ny manindry ity rohy manaraka ity: komorebi-2.1-64-bit.deb.
Ary avy eo dia miroso amin'ny fametrahana azy amin'ny fomba tena tsara indrindra ho an'ny tsirairay isika. Aminay dia mampiasa ity baiko baiko manaraka ity izahay:
Aorian'ny fametrahana azy dia manohy manatanteraka azy amin'ny fikarohana azy ao amin'ny Menu ho an'ny fampiharana, sokajy rafitra. Raha vantany vao nosokafana dia hovonoina ho fanombohana, vaovao Lohahevitra Desktop (Wallpaper) default. Ho an'ny Menu fanitsiana ampidirina amin'ny fipihana havanana amin'ny Desktop. Momba izany, ary amin'ny safidy an'ny «Change Wallpaper» (Change Wallpaper) afaka misafidy ilay tadiavintsika isika.
Raha te hanampy vaovao isika dia tsy mila mandika fampirimana efa misy eo amin'ilay lalana fotsiny «/System/Resources/Komorebi/» ary omeo anarana ny anarany. Soloy avy eo ireo rakitra «video.mp4» y «wallpaper.jpg», avy amin'ireo izay tiantsika indrindra mitazona anarana mitovy. Azontsika atao ny mahita sy mifidy azy ao amin'ny Menu fanitsiana, mampihetsika azy. Izany rehetra izany, araka ny hita amin'ny sary ambany avy hatrany.
naoty: Ny horonan-tsarinay (sary mihetsika) dia alaina avy amin'ny tranonkala Desktop Hut.
Ho an'ireo maniry hikirakira a Global Menu ho an'ny fangatahanao ao amin'ny Fomban'ny Mac OS mihoatra ny XFCE, ampio fotsiny a Panel farany ambony (Panel 2), ary ampio ireto singa manaraka ireto ao aminy: «Windows Header - Buttons» y «Módulo AppMenu». Araka ny hita amin'ireto sary etsy ambany ireto:
Raha vantany vao notanterahina ireo dingana rehetra ireo, nifanaraka tamin'izay GNU / Linux Distro amin'ny XFCE sy fampiasana Komorebi y AppMenu, na iza na iza dia hanana Birao vaovao manjelanjelatra aseho ao amin'ny Vondrona na vondrom-piarahamonina tiany indrindra, amin'ny andro marina izay «DiaDeEscritorio».
Ary raha te hampiasa a Conky toy ilay hita be etsy ambony, dia ampirisihinay hamaky ny lahatsoratray teo aloha mifandraika amin'izany ny Conky:
Conkys: Ahoana ny fomba hanamboarana ny Conkys mba tsy hampiasa Neofetch?
Manantena izahay fa izany "lahatsoratra kely ilaina" amin'ny «Komorebi», Fampiharana mahatalanjona izay miasa amin'ny maha-kanto sy namboarina azy mpitantana ny sary mihetsika sy sary mihetsika (sary) ho an'ny Linux, ary toa an'i Conky, dia mamela antsika hanome fikitika manokana ny anay dabilio, mba hampisehoana azy ireo ao amin'ny sary an-tsary ny andro izay ankalazantsika ny «DiaDeEscritorio»; dia liana sy ilaina lehibe, ho an'ny rehetra «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» ary fandraisana anjara lehibe amin'ny fanaparitahana ny tontolo iainana mahatalanjona sy goavambe ary mitombo «GNU/Linux».
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Komorebi: Ahoana ny fomba hanamboarana ireo latabatray amin'ny fiaviana mihetsika?